Sports – Bosaso Times News
Kooxda kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa ku guul daraysatay inay u soo baxdo ciyaaraha aduunka ee ka dhacaya sanadka danbe dalka Ruushka. Waa markii ugu horesay ee kooxda talyaaniga ay…
Waxaa caawa markale orday ordaaga caanka ah ee Soomaaliyeed una orda dalka Ingiriiska Maxamed Faarax kaas oo ka qayb qaadanayey oradkiisii ugu danbeeyey inta uusan ka fariisan ciyaaraha oradada uu…
Waxaa caawa markale si cajiib ah guul usoo hoyey halyeyga caanka ah ee Soomaaliyeed una orda dalka Ingiriiska Maxamed Faarax kaas oo ku guulaystay markale orodka 10,000 oo mitir…
Maxamed Cali Calay oo ahaa feeryahankii caanka ahaa ee aduunka ugu caan sanaa ayaa xalay ku geeriyooday dalka Maraykanka magaalada Phenix Arisona, halkaas oo ilaa Khamiistee uu cisbitaal kaga jiray.…
Waraka ka imaanaya Deegaanka Bariire oo ka tirsan Gobolka Sh/hoose ayaa Sheegaya in halkaas Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya, AMISOM iyo Ciidamo Mareykan ah ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan. Howl-galkan, ayaa waxaa…
Kooxda Leicester City ayaa ku guulaysatay horyaalka kubada cagta ee dalka Ingiriiska markii ugu horeysay taariikhda. Waxaa la yaab ah in aan qofna filayn in kooxdan ay ku guulaysato…
Giriigga oo u hanjabay dalalka Yurub
Khadro February 25, 2016 Giriigga oo u hanjabay dalalka Yurub2016-02-25T06:29:13+00:00 No Comment
Maamulka dalka Giriigga ayaa si cad u dhalleeceeyay dalalka Austriya iyo kuwa deriska la ah ee Balkans-ka oo iskudeyay inay xakameeyaan qulqulka qaxootiga. Iyodoo Giriigga ay gaarayaa kumanaan qof oo…
Dhugariir khasaare ka dhaliyay Taiwan
Khadro February 6, 2016 Dhugariir khasaare ka dhaliyay Taiwan2016-02-06T09:27:32+00:00 No Comment
Dhulgariirka oo cabirkiisa ahaa magnitude ayaa waxa uu inta badan dumiyay dhismooyin dhaadheer oo ku yaalla magaalada Tainan. Kooxaha dab demiska ayaa badbaadiyay in ka badan 2 boqol oo qof,…